Ikusasa Alisebenzi Futhi Alikaze Libekhona | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 2, 2016 Douglas Karr
I-paranoia ephathelene nekusasa lobuhlakani bokufakelwa, i-robotic, ne-automation idinga ukuma. Njalo uguquko lwezimboni nobuchwepheshe emlandweni luvulele abantu amathuba angenamkhawulo wokusebenzisa ithalente labo nobuciko. Akukhona ukuthi imisebenzi ethile ayinyamalali - yebo iyanyamalala. Kepha leyo misebenzi ithathelwa indawo yimisebenzi emisha.
Njengoba ngiqalaza ehhovisi lami namuhla futhi ngibuyekeza umsebenzi wethu, konke kusha! Ngiyabuka futhi ngethule ku-AppleTV yethu, silalela umculo ku-Amazon Echo yethu, sithuthukise izinhlelo zokusebenza zamaselula eziningi zamakhasimende, sinezinhlelo ze-infographic zamakhasimende, kuleli sonto sisize amaklayenti amabili amakhulu ngezinkinga eziyinkimbinkimbi zokusesha, ngingu sishicilela lokhu ohlelweni lokuphathwa kokuqukethwe, futhi sithuthukisa izindatshana ngemithombo yezokuxhumana.
Iqiniso ukuthi, angikaze ngiphuphe ngisho eminyakeni eyi-15 eyedlule ukuthi ngizoba ne-ejensi yami yezentengiso yedijithali futhi bengizosiza amaklayenti ukuthi azulazule nge-inthanethi. Indlela eya esikhathini esizayo ayinciphisi nokuncipha, ivuleka ngokubanzi nangokubanzi! Isigaba ngasinye se-automation senza nje isigaba esisha sokuziphendukela kwemvelo nokwenziwa okusha. Ngenkathi senza ithani lomqondo nomsebenzi wokudala wamakhasimende ethu, usuku lwethu oluningi lusetshenziselwa ukuhambisa idatha, ukusetha amasistimu, nokwenza. Uma sikwazi ukunciphisa lezo zinto, singadala okuningi kakhulu.
Ngikholwa ukuthi inselelo yethu, ikakhulukazi e-United States, ukuthi sifundisa futhi silungiselela abafundi bethu imisebenzi ezophela. Sidinga uhlelo olusha ngokuphelele ukulungiselela izizukulwane ezizayo ukuthi zisebenze phansi kulezi zindlela ezintsha zobuchwepheshe.
Impilo yamaColonial yathuthukisa le infographic, Imisebenzi engu-15 ebingakabi khona eminyakeni engama-30 edlule. Njengoba ubuyekeza uhlu lwemisebenzi namaholo amaphakathi, qaphela ukuthi mangaki akuma media ezidijithali!
Tags: unjiniyela wohlelo lokusebenzaBloggerumphathi wezokulalela omkhuluimpilo yamakholoniophethe i-droneNgokuzayoinfographicumhlaziyi wezokuphepha kolwaziimisebenziUchwepheshe we-seoumphathi wezokuxhumanaumklami wesipiliyoni somsebenzisiumsizi oqondileumhlaziyi wewebhu